AutoSEO vs. FullSEO - Ndeipi Semalt SEO Service Yakanakira Iwe
Saka, iwe pakupedzisira watora sarudzo yekuchenjera kuti uongorore uye ushandise Semalt's indasitiri inotungamira SEO masevhisi?
Nekuda kwesarudzo yako, munguva pfupi unozobatana nedziva rinogara richikura revatengi vanofara uye vakagutsikana vakapihwa rubatsiro kubva kumabasa edu ekushambadzira edigital. Asi nechisarudzo icho chinouya mutoro wakakura wekusarudza iro basa chairo. Imwe iyo yakakunakira iwe uye inoenderana nezvido zvako zvakananga uye zvinangwa zvebhizinesi.
Kana iwe uri kutsvaga kuvandudza SEO kuita kwe webhusaiti yako, Semalt inopa mbiri mureza mapakeji: AutoSEO uye FullSEO.
Nepo iwe unogona kunge uchitova nekunzwisisa kwakaringana kwezvese zvinosanganisirwa mumapakeji maviri aya, panogona kuramba paine nzvimbo yekusava nechokwadi nemibvunzo. Kana iwe uri kutanga muchikamu cheSEO, kutsanangurwa kwakadzama kuri kunyanya kudikanwa.
Saka, nhasi tinotora imwe nguva yekuenzanisa edu maviri-ari kutengesa zvakanyanya SEO mapakeji. Mushure mekuenda kuburikidza iyi inokurumidza yekuenzanisa mushumo, iwe uchave unokwanisa kusarudza iyo piritsi iyo yakakodzera kune rako bhizinesi.
AutoSEO uye FullSEO - Semalt's SEO Services
Ngatitangei nekutanga kuenda kuburikidza nezviri mumapakeji. Kunyange ivo vari vaviri vachinongedzwa kumabhizinesi, kune mutsauko muhupamhi wepasuru imwe neimwe. Ichi chikamu chinokupa rumwe ruzivo nezve misiyano iyi.
AutoSEO naSemalt ndeye 'imba izere' pakeji inovhara izvo zvakanyanya kukosha uye zvepakati kutsvaga injini optimization (SEO) zviitiko zvebhizinesi rako repamhepo. Iyo inomhanya SEO yekushandira webhusaiti yako uye inouraya akati wandei pane peji peji uye kure-peji zviitiko kuti uwedzere yako organic rankings.
Iwe une webhusaiti iyo isingaratidze pane Google organic yekutsvaga? AutoSEO inogona kukuratidza nzira painenge ichiitisa zvimwe zvakakosha zvikuru zvezviitiko zvekushandisa. Mamwe acho akanyorwa pazasi:
Keyword Research - Kuongorora kwebhizinesi rako, yako indasitiri, uye webhusaiti yako kuti uite rondedzero yakakosha mazwi senge mibvunzo iyo ingangoita vatengi vako vatengi painjini yekutsvaga seGoogle kana Bing. Ichi ndicho chimwe chezvinhu zvakakosha zveSEO
Pa-Peji Kugadziriswa - Kufuridzirwa kwemashoko akakosha emukati mukati mezvinyorwa zvega rega uye peji rega rewebhu webhusaiti yako pamwe nekugadzirisa zvimwe zvepa-peji zvinhu zvakadai semisoro, meta tsananguro, uye mufananidzo alt maitiro
Chibvumirano Chekuvaka - Icho chinozivikanwawo sekuti off-peji optimization, zvinosanganisira kuburitsa uye kuparadzira zvakaringana zvemukati pane mamwe mawebhusayithi uye kuwana zvinongedzo kudzoka kune yako dura. Izvi zvinogadzirisa kukosha kweSEO (domain domain, kunyanya) yewebhu webhusaiti nekutungamira SEO muto kubva kune aya masosi kune yako domain
Web Analytics - Mazuva ese, vhiki nevhiki, mwedzi nemwedzi, uye quarterly ongororo yewebsite analytics kuti unzwisise akasiyana metric senge traffic, shanduko, uye kubatirana kwakazara kubva kune vashanyi vako.
AutoSEO inoshandira yakawanda yeiyi zviitiko uye inokupa iwe inoshandira SEO yekushandira iyo ine chinangwa chekuwedzera yako yakamira kumira pawebhu.
Mufananidzo 1 - Kuongorora analytics data chikamu chakakosha cheSEO (AutoSEO inopa)
Chinhu chinosiyanisa AutoSEO kubva kuFSSEO ndechekuti yekutanga inopa mhinduro nekukurumidza. Kana iwe uine niche bhizinesi uye uine kuvimba nemakwikwi akadzika pamhepo, AutoSEO inogona kukuwana iwe mhedzisiro mune imwe nyaya yemavhiki mashoma. Mupfungwa yakajairika, SEO inowanzoita mwedzi yakawanda kuti iite zvakanaka. Nekudaro, iwe unofanirwa kucherechedza kuti Semalt ichaita yekutanga kuongorora kuti unzwisise kuti mhedzisiro inogona kukurumidza sei. Kuongororwa kwakadzama uye kukurukura kwakazotevera nerubatsiro rwevatengi vedu kunogona kubatsira kuti muuye neyakaomarara nguva.
Nezvenyaya iyi, AutoSEO yakanakira mhando dzevashandisi vanotevera:
Vanamuzvinabhizinesi vachitsvaga SEO rutsigiro kune vanoverengeka mabhizinesi epamhepo
Blogger uye vanyori vanotarisa kukwezva traffic / kuverenga
Kufuridzira uye vakakurumbira internet
Tora muenzaniso waVaibhar Chaurasia we HealthKart uyo aishandisa masevhisi edu eVPSSE kushinha webhusaiti yake kuzere paGoogle India. Mukati memwedzi miviri, takakwanisa kuvandudza manhamba ebhizinesi rake-rakakosha mazwi. "Ndingakurudzira zvikuru kune avo vanotanga nemakambani, ari kurwara nehurema uye kusanyatsooneka webhusaiti yavo," anodaro Chaurasia uyo anokurudzira Semalt kune vese vachangotanga mabhizinesi, mabhizinesi, uye MSMEs kutenderera nyika.
AutoSEO ichava sarudzo yakanaka kana iwe uri mutsva kunyika yeSEO (kana kutengesa kwedijitari, mune zvakawanda) kana uri kutsvaga mhinduro dzinokurumidza. Kana iwe uri bhizinesi rekutanga iro rinoda kutora nekukurumidza asi rizere mukana weiyo coronavirus kubuda kwezvinhu , isu tinokurudzira AutoSEO.
Nekudaro, kana zvinangwa zvako zviri zvenguva refu uye iwe uchida kuvaka mbiri yakasimba yebhizinesi rako online kuburikidza neSEO, unofanirwa kutarisa paFLSESEO, yedu A-to-Z SEO package.
Mazuva ano munhu wese anozvidaidza kuti inyanzvi yeSEO. Izvi zvinogona kuve zvechokwadi kana iwe uchingofunga kungogonesa webhusaiti uye nekunyora zvemukati senzira yekuwana organic mhinduro. Muchokwadi, uye iwe uchaziva izvi, SEO yakadzama uye yakaoma kunzwisisa kupfuura iyo.
Kuti uve nebudiriro yeSEO yebhizimusi yebhizinesi yako inokuwanisa shanduko chaidzo (kureva vatengi chaivo), iwe unofanirwa kupfuura izvo zvekutanga. Ndipo paye ndipo panosvika FullSEO naSemalt mumufananidzo.
Iyo yekumberi shanduro ye AutoSEO, iyi package inokupa zvese zvaunoda mune SEO mushandirapamwe. Kubva pane keyword research kuenda kubvunza, FullSEO ine zvese izvo bhizinesi inoda kukurudzira kuvepo kwayo online nekusimbisa kutengesa kwayo. Tiri kutaura kuwanda kwetraffic, inotungamira, uye yakazara kubatwa uye mukurumbira webhusaiti yako pakati pemateru.
Mufananidzo 2 - Tsigiro yemutengi ndeimwe yemhando yepamusoro yeFedSEO kana ichienzaniswa ne AutoSEO
Ne FullSEO, iwe uri kutarisa kuwedzera kwekutengesa, purofiti, uye kushamwaridzana nevatengesi vechitatu-bato. Iyo yekuwedzera inokubatsira iwe uye bhizinesi rako kupfuura mwedzi uye makore iwe unomhanyisa chirongwa cheSSESEO inokupa iwe mibairo kwenguva refu. Sezvaunoziva, kuvaka webhusaiti yakasimba ine chinzvimbo chakakwirira chiremera nhasi kunogona kukohwa iwe zvakanaka kwemakore nemakore anouya.
Heino runyorwa rwezviitiko zvakakosha izvo iwe zvauchazowana mukuwedzera kune zvese izvo AutoSEO inopa:
Webhusaiti Yekugadziridzwa Kwemhando yepamusoro - CMS optimization, schema markup, kumhanyisa mhanyisa peji, sitemaps, uye GA / GTM tagging. Kuwedzeredzwa kwakazara kwewebhu webhusaiti yako kuchapihwa pamwe nekucheka-kumhedzisiro mhinduro dzinozivikanwa mune iyo SEO maindastiri ekushambadzira
Zvemukati - Zvese zvega zvirimo zvinodiwa - kubva pawebhusaiti blog kuenda munharaunda midhiya kutumira kune PR kubuda - ichave inofungidzirwa, kuumbwa, uye kuburitswa kuti ive nani ye webhusaiti yako SEO kukosha
Kubvunza - kana iwe uri mutsva kune SEO, saka iwe uchazoda kubvunzana pane yakanyanya kunaka maitiro. Semalt's FullSEO package ichakupa mazano ezve pamusoro pekutumira zvinyorwa, nzira dzepamberi nehunyanzvi senge vapfumi snippets, uye zviitiko zvakasiyana siyana zvine chokwadi chekusimbisa webhusaiti yako peji peji rako raunoda kusarudza injini.
Chaizvoizvo, neFedSEO, iwe uchawana chirongwa chakagadzirirwa bhizinesi rako repamhepo rinotarisa pamufananidzo mukuru. Iwe uri mutsva we e-commerce mutambi mune ino indasitiri yato zara nemahwigs uye yakagadzwa mawebhusayithi? FullSEO ichakusundidzira pamusoro pavo chaipo pamamhepo online.
Tora muenzaniso we e-commerce kambani Zanvic, iyo yakatora mukana we Semalt's FullSEO masevhisi uye yakakwanisa kuwedzera yayo organic traffic nekusvika ku500% mumwedzi isingasviki manomwe. Pakupera kwemwedzi mitanhatu yekutanga yemushandirapamwe, Semalt akakwanisa kuunza anopfuura zana nemashanu emashoko ake akakosha mumigumo gumi yepamusoro yeGoogle.
Zviri pachena kuti FullSEO zvirokwazvo ine kumusoro kwepamusoro pe AutoSEO uye kuti inotora nzira yakazara. Asi saka unoziva sei kana iyo FullSEO ndeye yako kana kwete?
Mukufananidza, FullSEO inokurudzirwa kune emakambani, anowana mari epasi rese kutanga, uye makambani anotarisira kukanganisa indasitiri yavo.
Ndeupi Waunofanira Kusarudza?
Sezvo iwe uchigona kutsikisa kubva pazvikamu zviri pamusoro, zviri pachena kuti AutoSEO ndeye Starter SEO pepa rine zviitiko zvishoma mukuyera kwayo. Naizvozvo, iyo yakakwana kune vanhu vamwe uye madiki madiki anotangisa anoda kukurumidza mhinduro.
Kune rimwe divi, Semalt inokurudzira FullSEO kune emakambani uye e-commerce mawebhusaiti avo vanofanirwa kufunga kwakakura uye vanoita zvakakura kuti vakwanise kubudirira pamberi pemakwikwi makuru.
Kuenzanisa kwe AutoSEO uye FullSEO: Chidimbu Chidimbu
Isu tinoziva kuti vamwe venyu vanogona kukurumidza kugadzirira pane basa kunyanya panguva ino yekuvhara. Saka, heino kupfupisa kukurumidza muchimiro chetafura. Tarisa uone kuti mapakeji eSEO akazara akasiyana papi nemameter.
Parizvino, iwe unofanirwa kuve nemafungiro akanaka nezvesarudzo yako. Nepo vaviri AutoSEO uye FullSEO vaine zvakanakira zvakanakira, iwe unofanirwa kusarudza iyo inonyatsokodzera zvaunoda.
Kuti uwane yekutanga kuongorora webhusaiti yako, taura nesu nhasi . Unogona zvakare kutanga yako AutoSEO muyedzo wekupa nekudzvanya pano.